Maitiro Ekutanga Iyo Yakabudirira Kambani | Martech Zone
Svondo, June 28, 2009 Douglas Karr
Gore rekupedzisira ndanga ndichishanda pane bhizinesi nevamwe vadikani. Kutanga bhizinesi kwave kuri kwakaomesesa, kunodhura, uye kupedza nguva chirongwa chandati ndamboita. Ndakave nehukama pamwe nekutengesa zvigadzirwa zvisati zvaitika, asi ndiri kutaura nezvekutanga kambani inoda kudyara, vashandi, vatengi, nezvimwe. Kwete yekuvaraidza - bhizinesi chairo.
Chikamu chegore rapfuura chave kushanda mumatunhu evanamuzvinabhizimusi vari kuita mabhizinesi avo vega kana kuti vatanga zvavo mabhizinesi. Ndine rombo rakanaka kuva neshamwari dzakawanda mumativi iwayo. Ndakave nemoyo wekukurukurirana pamoyo nevazhinji vavo - vese vakandikurudzira kutora iyo leap.
Unotanga sei bhizinesi rakabudirira? Kuwedzera mari? Vaka chigadzirwa? Tora rako rezinesi rebhizinesi? Unowana hofisi?
Bvunza mumwe muzvinabhizimusi uye iwe unowana imwe mhinduro. Vamwe vema chipangamazano edu vakatisundidzira kuti titore memorandamu yekumisikidza zvigadzirwa uye kuti titange kuita denderedzwa remari. Uku kwaive kusiri kudhura kwakachipa kutanga bhizinesi! Isu takatanga yakatemerwa dhizimusi mubatanidzwa uye iyo PPM, asi yepasi yakadonha kubva mumusika uye kukwidza mari kwakaramba kwakabatirira.
Kubva ipapo, isu takangoshanda mamwe mapurojekiti kuti tiite bhizinesi isu pachedu. Mukufunga kumashure, ini handina chokwadi kana iyo PPM yaive yekutanga nhanho yekutanga. Isu tinorova pasi tichimhanya nemurwi wemabhiri epamutemo uye hapana prototype. Ini ndinofunga dai ndaigona kudzosera nguva, tingadai takaunganidza zviwanikwa zvedu ndokutanga kuvandudza.
Zviri nyore kwazvo kutsanangura bhizinesi rakakomberedza chigadzirwa nemuenzaniso wechigadzirwa. Kuwana iko chaiko bhizinesi rekubatanidza raive zano rakanaka… kana iwe uine vanopfuura mumwe muridzi. Ukasadaro, handina chokwadi chekuti unochida kudzamara mutengi wekutanga arova. Kana iri iyo PPM (iyi ipakeji yakapihwa kune vanoisa mari), usatombo kunetseka nezvazvo kusvikira iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge
Bhizinesi chirongwa? Vazhinji vemazano edu vakatiudza kuti tigare pane chirongwa chebhizinesi uye tishande, pachinzvimbo, pakuwana mhedziso pfupi kwazvo pamwe chete yaive yakanangidzirwa kune vatengesi vedu. Une investor anoda ROI? Tsanangura iyo ROI nyaya. Investor uyo anoda kuchinja nyika? Taura nezve mashandisiro aunoita nyika. Kushandisa vanhu vazhinji? Taura nezve kukura kwebasa iro kambani yako ichaita.
Ini handina kushushikana nemugwagwa watatora, ini handitendi kuti ndiwo wakanaka. Vemabhizimusi vane kambani inobudirira pasi pebhandi ravo vane nguva iri nyore kutanga iyo inotevera kambani. Vashandi vanoita zvekutamba pamusoro pako uye vanhu vekupedzisira vawakaita vakapfuma vari kutarisira mukana unotevera wauri kutanga.
Mhinduro ipfupi ndeyekuti mumwe nemumwe wevaya vandinoziva vakatora nzira yakasarudzika yekutanga kambani yavo. Vamwe vakavaka zvigadzirwa uye vatengi vakauya. Vamwe vakakwereta mari kumabhangi. Vamwe vakakwereta kushamwari uye mhuri. Vamwe vakagamuchira mari yekubatsira. Vamwe vakaenda kuvashambadziri…
Ini ndinofunga nzira hurusa yekutanga kambani yakabudirira ndeyekushandisa nzira yaunonzwa kugadzikana nayo… uye kuomerera pairi. Edza kusarega vanhu vekunze (kunyanya vatengesi) vachikurudzira kwaunotora. Iyo nzira iyo iwe yaunofanirwa kubudirira pakubata.
Kunyangwe pasina mumwe wevatapi vedu vanobvumirana nazvo sei kuzviita, vese vanobvuma kuti isu fanira zviite… uye zviite izvozvi. Saka… isu tiri!
James Carville uye 3 Kiyi dzeKubudirira Kushambadzira